Tsiroanomandidy : Olona efatra matin’ny fiara sprinter -
AccueilSongandinaTsiroanomandidy : Olona efatra matin’ny fiara sprinter
13/03/2018 admintriatra Songandina 0
Namoa-doza indray ny fiara taksiborosy sprinter, ka lehilahy miisa efatra no namoy ny ainy vokatr’izany, raha toa mpandeha miisa sivy no naratra mafy. Tany amin’ny lalam-pirenena voalohany, tao Ankadilalana, distrikan’i Tsiaroanomandidy no nisehoan’ity lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ity omaly, tokony ho tamin’ny 02 ora maraina. Araka ny nambaran’ny kaomisera iray avy eo anivon’ny kaomisarian’ny polisy any an-toerana izay nandray an-tanana ny raharaha , dia teo amina fiolahana izay nisy fiakarana no niseho ny loza. “Simba ny fitaovana fiarovana amin’ny halatra eo amin’ny familiana ity fiara ity, ka tafahodina ary nitrosina ny lohany avy eo”, hoy ny fanampim-baovao. Raha ny voalaza ihany koa, dia tafaverina ary nitodi-doha ohatran’ny ho any Tsiroanomandidy mihitsy ny lohan’io fiara izay hizotra hiakatra aty Antananarivo io. Noezahana nialana nenina tany amin’ny hopitaly niaraka tamin’ireo naratra moa ireo mpandeha efa-dahy namoy ny ainy ireo, saingy tsy avotra intsony rehefa tonga tany an-toerana.
Marihina ihany koa, fa isan’ireo naratra vokatr’iny loza iny ny mpamilin’io fiara taksiborosy io.
“ Voa teo amin’ny tratrany ny saofera, ary araka ny fitarafana izay natao, dia voalaza fa nisy tapaka tao amin’ny lamosiny “, hoy ihany ny fanamarinam-baovao avy eo amin’ity tompon’andraikitra ity. Ankoatra ireo maty sy ireo naratra izay voa teo amin’ny faritry ny loha, ny tanana ary ny tongotra dia nahitana fahavoazana be ihany koa ity fiara taksiborosy ity, satria dia nikaperotra ny tafony sy ny vatany, ary saika vaky avokoa ireo fitaratra. Niteraka resabe tany anaty tambazotran-tserasera “facebook”, ny fahitana ny laharan’ity fiara taksiborosy sprinter nidiran-doza ity mbola mitondra laharana avy any ivelany. Rehefa nanontaniana mahakasika izany anefa ny kaomisera nanao fidinana ifotony tamin’ity tranga ity, dia nanamafy fa mitondra ny laharana eto an-toerana, ary ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra mahakasika io fiara io. “Raha ny taratasy eto am-pelatanana, dia gasy tanteraka ny laharan’io fiara io, saingy tsy fantatra izay taratasy namboarin’ny tompony”, hoy ny nambarany. Rehefa vita moa ny fanadihadiana rehetra tokony hataon’ireo mpitandro filaminana dia atolotra eo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha.